DPF အစားထိုးများ DPF သန့်ရှင်းရေးနှင့်ပြန်လည်ထူထောင်ရေးဝန်ဆောင်မှု။ .95 မှစတင် DPF သန့်ရှင်းရေး
လောလောဆယ် Follow ကိုသတ်မှတ်
DPF သန့်ရှင်းရေး / ပြန်လည်ထူထောင်ရေး ၀ န်ဆောင်မှုများ
DPF နှင့် DOC Recore
အဘယ်ကြောင့် DPF အခြားနည်းလမ်း
DPF အခြားနည်းလမ်းများက OEM မှအလိုအလျှောက်ခွင့်ပြုထားသော၊ နင့်မုန့်ဖုတ်ခြင်း၊ DPF ၏လည်ပတ်မှုကိုပိုမိုကြာရှည်စေရန်အမေရိကန်၏အကောင်းဆုံးရွေးချယ်မှု။
ဝန်ဆောင်မှုတည်နေရာများ သို့မဟုတ် Quote ကိုခေါ်ပါ 833.373.2583 ext: 0
အဘယ်ကြောင့် DPF အခြားရွေးချယ်စရာများကိုရွေးချယ်ပါ?
DPF Alternatives များသည်လေ့ကျင့်ပြီးအသိအမှတ်ပြု DPF ပညာရှင်များနှင့်လစဉ်ဖွင့်လှစ်ထားသောနေရာများရှိသည်။
ကျွန်ုပ်တို့သည်မည်သည့်အရာကိုမဆိုပြန်လည်သန့်ရှင်းပေးပါလိမ့်မည် DPF အသစ်သောကုန်ကျစရိတ်၏အစိတ်အပိုင်းမှာအာမခံရလဒ်များနှင့်အတူအသစ်သောအခွအေနေကြိုက်တယ်။ ကျွန်ုပ်တို့၏ DPF ဝန်ဆောင်မှုများအပြင်ကျွန်ုပ်တို့လည်းကမ်းလှမ်းသည် ကို DOC (ဒီဇယ်အောက်ဆိုဒ်ဓာတ်ကူပစ္စည်း), SCR (Select Catalyst Reduction) နှင့် EGR (Exhaust Gas Recirculation) သန့်ရှင်းရေးနှင့်ပြန်လည်ထူထောင်ရေး။ 833.737.2583 ext: 0
အမှတ်တံဆိပ် ၁ ခု၊ နာမည် ၁ ခု၊ ၀ န်ဆောင်မှုတူတူသောစက်ကိရိယာများ = ၀ န်ဆောင်မှုနှင့်အရည်အသွေးမှာကိုက်ညီမှုရှိခြင်း
24hr turnaround မှ 48hr
အခမဲ့ pick-up နှင့်ဖြန့်ဝေ
DPF Replacement တွင်ရာနှင့်ချီသောထောင်ပေါင်းများစွာသို့မဟုတ်သန်းချီသောသူများကိုချွေတာခြင်းဖြင့်ရလဒ်ကောင်းများရရှိသည်။ 3mo, 6mo, 1yr နှင့်တစ်သက်တာအာမခံရွေးချယ်မှုများရရှိနိုင်ပါသည်။ ခြားနားချက်ကိုတွေ့ကြုံခံစားလာကြ။ ကျွန်ုပ်တို့သည် DPF သန့်ရှင်းရေးနှင့်ပြန်လည်ထူထောင်ရေးအတွက်အမေရိကန်၏အကောင်းဆုံးရွေးချယ်မှုဖြစ်သည်။ 833.737.2583 ext.0
DPF (ဒီဇယ်မှုန်စစ်ထုတ်စက်) သန့်ရှင်းရေးသည်အဘယ်ကြောင့်အရေးကြီးသနည်း။
ပထမအကြိမ် DPF ကိုစနစ်တကျသန့်ရှင်းခြင်းနှင့်ထိန်းသိမ်းခြင်းသည်သင့်အားအလွန်အမင်းအကုန်အကျများပြီးမလိုလားအပ်သောပြိုကွဲမှုများမှသင့်အားကာကွယ်ပေးလိမ့်မည်။ ယခု DPF စနစ်ကိုသင်ကောင်းစွာထိန်းသိမ်းထားပါကဒေါ်လာ ၁၀၀၀၀ မှ ၃၀၀၀၀ အထိဆိုးဝါးသောဆုံးရှုံးမှုများကိုအလွယ်တကူရှောင်ရှားနိုင်သည်။ ဟာသမဟုတ်ဘူး။ ဒီလူမဖြစ်နဲ့ ဤနေရာတွင် DPF Alternatives တွင်ကျွန်ုပ်တို့၏ကိရိယာများ၊ လုပ်ငန်းစဉ်များနှင့်စီးပွားဖြစ် SL1 ဖြေရှင်းချက်သည် DPF ကို OEM သတ်မှတ်ချက်များသို့ပြန်လည်ပေးလိမ့်မည်။ ကျွန်ုပ်တို့၏အာမခံမတူနိုင်ဆုံးနှင့်စက်မှုလုပ်ငန်းအတွက်အကောင်းဆုံးဖြစ်ပါတယ်။ သင့်အားအလွန်ဆိုးရွားသည့် DPF ရက်များမှသင့်ကိုကယ်တင်လိမ့်မည်။ 833.737.2583 ext.0
DOC (Diesel Oxidation Catalyst) သန့်ရှင်းရေးသည်အဘယ်ကြောင့်အရေးကြီးသနည်း။
DOC (Diesel Oxidation Catalyst) သည်သင့်လျော်သော DPF လုပ်ဆောင်မှုအတွက်အရေးကြီးသည်။ ၎င်းသည် DPF ၏အထက်ပိုင်းတွင်တည်ရှိသည်။ ၎င်းသည် DPF ကဲ့သို့တစ်ချိန်တည်းတွင်စနစ်တကျ ၀ န်ဆောင်မှုမရရှိပါက DPF ကိုအချိန်မတန်မီချိတ်နိုင်သည်။ အသံရှုပ်ထွေးလား။ ကျွန်တော်တို့ကိုရှင်းပြရန်ခွင့်ပြုပါ။ အကယ်၍ DOC တွင်စုဆောင်းပြီး DPF အသစ်တစ်ခုသို့မဟုတ်သန့်ရှင်းသော DPF တစ်ခုကိုထည့်သွင်းပါကသင်အင်ဂျင်ကိုသင်စတင်သောဒုတိယ DOC မှအမှုန်အားလုံးသည် DPF သို့တိုက်ရိုက်သွားပြီး DPF ကိုပြန်လည်ချိတ်ဆက်စေလိမ့်မည်။ ဤသည်သည်ဤစက်မှုလုပ်ငန်းအတွက်အကြောင်းပြချက်များစွာအနက်မှတစ်ခုဖြစ်ပြီးသုံးစွဲသူများသည် DPF ကိုအစားထိုးသို့မဟုတ်ဝန်ဆောင်မှုပြီးနောက်မကြာမီတွင်အင်ဂျင်မီးများ၊ နှေးကွေးသောစွမ်းအင်နှင့်အပိုဆောင်းကုန်ကျစရိတ်များကိုစစ်ဆေးသည်။ ဒါဟာငါတို့အားလုံးအတွက်အကြီးအကျယ်ခေါင်းကိုက်တယ်။ ငါ့ကိုယုံ။ ကလေးရဲ့အနှီးကိုသင်မပြောင်းဘဲနောက်ကွယ်မှသုတ်ပေးမှာမဟုတ်ဘူး။ မမျှော်လင့်ဘူး DOC ကို ၀ န်ဆောင်မှုမပေးဘဲ DPF ကိုမသန့်ရှင်း၊ DPF နှင့် DOC နှစ်ခုလုံးယူလာပါက၎င်းတို့သည် OEM specs သို့ပြန်ရောက်အောင်သေချာပါစေ။ 833.737.2583 ext.0
SCR (Selective Catalyst Reduction) သန့်ရှင်းရေးသည်အဘယ်ကြောင့်အရေးကြီးသနည်း။
ဒါကလှည်တစ်ခုပါ။ SCR (Selective Catalyst Reduction) သည်နိုင်ငံတစ်ဝန်းလုံးတွင်ကြီးမားသောပြissuesနာများကိုဖြစ်ပေါ်စေသည်။ ပိုင်ရှင်များသည်ဒေါ်လာဘီလီယံနှင့်ချီသောရောဂါရှာဖွေခြင်းနှင့် SCR အစားထိုးခြင်းအတွက်ကုန်ကျသည်။ SCR သည် DPF ၏အောက်ပိုင်းတွင်ရှိသည်။ များသောအားဖြင့် aftertreatment orientation သည်အောက်ပါအတိုင်းဖြစ်သည် - DOC, DPF နှင့် SCR ။ ယနေ့နှင့်ယခုအချိန်အထိလူအများက“ သင်သည် SCR ကိုမသန့်ရှင်းနိုင်ပါ” ဟုပြောကြသည်။ သူတို့မှားတယ်လို့ငါတို့မပြောဘူး၊ ငါတို့ကမှန်တယ်လို့မပြောဘူး။ ကျွန်တော်တို့ပြောမည့်စကားမှာ Detroit 1box စနစ်များအပါအ ၀ င်ထောင်နှင့်ချီသော SCR စနစ်များနှင့်ပြည့်နေသောမီးဖိုများကို ၀ န်ဆောင်မှုပေးထားသည်။ ကျွန်ုပ်တို့၏လုပ်ငန်းစဉ်သည်ပုံသွင်းထားသော DEF သိုက်များကိုဖယ်ထုတ်ရုံမျှမက (ဓာတ်ငွေ့ထွက်ဓါတ်ငွေ့များကိုသင့်တော်စွာဖြန့်ဖြူးရန်အဟန့်အတားဖြစ်စေသည် (အမြတ်ပိုက်မှထွက်သောသုညသို့သုညသို့ဓာတ်ကူဓာတ်ပြုခြင်းအားကူညီခြင်း)) ကျွန်ုပ်တို့သည် Catalyst ကိုယ်တိုင်မထိခိုက်စေဘဲပြုလုပ်နိုင်သည်။ သင်သည် SCR ကိုဒေါ်လာ ၅၀၀၀ သို့မဟုတ်ထိုထက်ပိုသောနေရာတွင်အစားထိုးခြင်းမပြုမီကျွန်ုပ်တို့ကိုဖုန်းခေါ်ပါ။ ကျွန်ုပ်တို့သည် OEM spec သို့ပြန်ပါမည်။ 833.737.2583 ext.0
ကျွန်ုပ်တို့ဝန်ဆောင်မှုပေးသော DPF စနစ်များ
Cummpens DPF၊ Volvo DPF၊ Mac DPF၊ ဒက်ထရွိုက် DPF၊ Ford DPF၊ Dodge DPF, Duramax DPF, Kubota DPF၊ John Deer DPF, Caterpillar DPF၊ Hino DPF၊ Isuzu DPF, Huss DPF၊ Perkins DPF၊ DPF၊ Mercedes DPF, JCB DPF, Hatz DPF, Doosan DPF, Roadwarrior DPF, Skyline DPF, Dinex DPF, Durafit DPF, Maxfilter DPF
မင်းရဲ့ DPF ကိုမမြင်ဘူးလား ငါတို့ဆဲဆဲ 833.737.2583 ext.0
အသေးစား DPF၊ ဆောက်လုပ်ရေး DPF၊ စိုက်ပျိုးရေး DPF၊ Transit DPF၊ OTR DPF၊ ခရီးသည်များအတွက်ပေါ့ပေါ့ / အလတ်စားနှင့်လေးလံသော DPF အတွက်ခရီးသည်။ သင်၏လုပ်ငန်းကိုမမြင်ရလား ကျနော်တို့နေဆဲဝန်ဆောင်မှု။ ကိုးကားရန်တောင်းဆိုပါ 833.373.2583 ext.0
~ Cleaner Longer ™ကိုဖွင့်ပါ ~
ကျွန်ုပ်တို့၏ ၀ န်ဆောင်မှုပေးသူများကကျွန်ုပ်တို့အကြောင်းပြောသောအရာကိုဖတ်ပါ :
"ငါပြောသမျှအားလုံး WOW ဖြစ်ပါတယ်။ ကျွန်ုပ်တို့သည် DPF Alternatives များကိုစတင်အသုံးပြုသောကြောင့်ကျွန်ုပ်တို့သည်အောက်ခြေလိုင်းကိုစုဆောင်းသိုလှောင်ထားသည်။ DPF ၏အခြားရွေးချယ်စရာများစျေးနှုန်းသည်အကောင်းဆုံးဖြစ်သည်။ ထို့အပြင်ကောက်ယူခြင်းနှင့်ဖြန့်ဝေခြင်း - အံ့သြဖွယ်ကောင်းသောဝန်ဆောင်မှုတစ်ခုဖြစ်သည်။ သင်နှင့်သင်၏ပြိုင်ဘက်ကင်းသော ၀ န်ဆောင်မှုများကိုကျွန်ုပ်တို့အားလုံးအသိပေးပါမည်။ ကျေးဇူးထပ်တင်ပါရစေ။"
“ DPF Alternatives များသည် DPF filter သန့်ရှင်းရေးများတွင်ဂိမ်းကိုပြောင်းလဲနေသည်။ ငါမပျော်ဘူး ငါ 12 filter များနှင့်အတူအားလုံး isx ရှိသည်။ ကျွန်ုပ်၏ကုန်တင်ကားများသည်ကော်လိုရာဒိုကိုဖြတ်သန်းသွားသောအခါကျွန်ုပ်၏ရေယာဉ်သည်အတ္တလန်တာနှင့်ကုန်သွယ်ရေးမြို့တော်မှ DPF ၏အခြားနည်းလမ်းများမှဖြစ်သည်။ ငါအရင်ကရတဲ့သန့်ရှင်းရေးအမျိုးအစားကိုဘယ်တော့မှပြန်သွားမှာမဟုတ်ဘူး။ ”
အကြှနျုပျ၏ထရပ်ကား Awesome ကိုအပြေးနေသည် !!!
“ ကျွန်တော့်မှာ ၂၀၀၈ Ford F2008 ရှိတယ်။ အဆိုပါ DPF တက်ပလပ်။ တစ်ပတ်အကြာသူတို့ထရပ်ကားကိုသူတို့ဆွဲထုတ်ပြီးတဲ့နောက်ကုန်သည်ဆီကျွန်တော်သွားခဲ့တယ်။ သူတို့ကကျွန်တော့်ဓာတ်ကူပစ္စည်းအက်ကွဲသွားပြီးအစားထိုးဖို့လိုတယ်၊ DPF ကိုလည်းချိတ်ထားပြီးအစားထိုးဖို့လည်းလိုတယ်။ ငါ့ကိုနီးပါး $ 350K တံခါးမှထွက်ကုန်ကျခဲ့ပါတယ်။ ငါအွန်လိုင်းတယ်ငါ့ရွေးချယ်မှုသုတေသနပြု။ တိုတိုပြောရရင်သူကကျနော့် DPF ကိုသန့်ရှင်းတယ်။ သူကကျွန်တော့်ဓာတ်ကူပစ္စည်းကိုသန့်ရှင်းတယ်။ အရောင်းကိုယ်စားလှယ်ကအက်ကွဲသွားပြီးအစားထိုးဖို့လိုတယ်။ ဒေါ်လာ ၁၀၀၀ အောက်ကနေကျွန်တော်သူတို့ကိုလုပ်ခဲ့တာတွေပါ။ ကျွန်တော့်ထရပ်ကားကအရမ်းကောင်းနေတယ်။ ”
မင်းရဲ့ Ultrasonic Diesel Particulate Filter သန့်ရှင်းရေးလုပ်တာကိုငါအနည်းငယ်သံသယ ၀ င်မိတယ်။ ဒါပေမဲ့အဲဒါပြီးသွားတဲ့အခါကျွန်တော်မပျော်ဘူး။ ငါ DPF ဒီသန့်ရှင်းတဲ့ပုံစံမျိုးပြန်လာတာမျိုးတစ်ခါမှမကြုံဖူးဘူး။ သင်၏ ၀ န်ဆောင်မှုကိုကျွန်ုပ်တို့စတင်အသုံးပြုချိန် မှစ၍ ကျွန်ုပ်တို့၏ထရပ်ကားများသည်များများစားစားပြန်လည်မတက်တော့ဘဲကျွန်ုပ်ပြုလုပ်ခဲ့သောမူလသန့်ရှင်းရေးထက်များစွာပိုကြာခဲ့သည်။ ကျေးဇူးထပ်တင်ပါရစေ။"
ဝန်ဆောင်မှုတည်နေရာများ & လစဉ်လတိုင်းဖွင့်လှစ်
DPF ALTERNATIVES ပြင်သစ်အခွင့်အလမ်းများ
DPF Alternatives များသည်စျေးကွက်များစွာကိုလျင်မြန်စွာရောင်းချခြင်းဖြင့်ရနိုင်သောအခွင့်အရေးများရှိသည်။ အကယ်၍ သင်သည်မြင့်မားသောဒဏ်ခံနိုင်ပြီးလျင်မြန်စွာကြီးထွားလာနေသောနယ်ပယ်ဈေးကွက်သို့ ၀ င်ရောက်လိုပါက DPF Alternatives မိသားစုသည်ထူးခြားမှုကိုလုပ်လိုသောကြီးကျယ်တဲ့အသင်းကစားသမားများကိုအမြဲရှာဖွေနေသည်။
၀ န်ဆောင်မှုအပြည့်ရှိသောဒီဇယ်ပြင်ဆင်ရေးဆိုင်ပိုင်ရှင်များ - သင်သည်ကျွန်ုပ်တို့၏ပစ္စည်းကိရိယာများကိုကုန်ကျစရိတ်လုံးဝမယူရန်သင်အရည်အချင်းပြည့်မီသည်ကိုကြည့်ပါ။
ကျွန်ုပ်တို့၏ VP Chris Burrei (435) 817-3828 သို့ဆက်သွယ်ပါ။
Ultrasonic DPF သန့်ရှင်းရေး = သာလွန်ထုတ်လွှတ်မှုဖြေရှင်းချက်
DPF အခြားနည်းလမ်းသည်သင်၏ Aftertreamtment အစိတ်အပိုင်းများကိုထောက်ပံ့သူဖြစ်သည်
DPF ရွေးချယ်စရာများ : မနက်ဖြန်သန့်ရှင်းရေး
သင်၏မော်တော်ယာဉ်၏ဒီဇယ်မှုန်စီစစ်စက်သည်ပတ်ဝန်းကျင်ကိုကာကွယ်ပေးပြီးကျွန်ုပ်တို့၏စီးပွားဖြစ် Ultrasonic DPF သန့်ရှင်းရေးလုပ်ငန်းစဉ်သည်သင်၏ပိုက်ဆံအိတ်ကိုကာကွယ်ပေးသည်။ ကျွန်ုပ်တို့၏ ultrasonic DPF သန့်ရှင်းရေး ၀ န်ဆောင်မှုသည် DPF ရှိဆဲလ်တိုင်းအားအခြေအနေအသစ်ကိုနှစ်သက်စေရန်တစ်ခုတည်းသောသက်သေပြသည့်နည်းလမ်းဖြစ်သည်။ DPF Alternatives ၏သန့်ရှင်းရေးစနစ်သည်သင်၏ filters ၏သက်တမ်းကိုတိုးမြှင့်ခြင်းအားဖြင့်ကုန်ကျစရိတ်ကိုလျှော့ချပေးသည်။ ကျွန်ုပ်တို့သည်ကျွန်ုပ်တို့၏နည်းပညာကိုယုံကြည်စိတ်ချစွာဖြင့်ကျွန်ုပ်တို့၏ဖောက်သည်များအားတစ်နှစ်စွမ်းဆောင်ရည်အာမခံချက်မရှိသောစက်မှုလုပ်ငန်း ဦး ဆောင်သူများကိုပေးသည်။
ကျွန်ုပ်တို့၏သာလွန်သန့်ရှင်းသောလုပ်ငန်းစဉ်သည်အစိတ်အပိုင်းများကို OE သတ်မှတ်ချက်များသို့ပြန်လည်ပေးသည်။ လောင်စာဆီချွေတာမှုနှင့် DPF filter တိုင်းမှပိုမိုအသုံး ၀ င်သောဘဝကိုအာမခံခြင်း။ ကျွန်ုပ်တို့၏သက်သေပြထားသော Ultrasonic သန့်ရှင်းရေးနည်းလမ်းသည်မြှုပ်ထားသောမီးခိုးများနှင့်ပြာများကိုဖြိုခွဲရန်စက္ကန့်လျှင်သန်းပေါင်းများစွာသော Impulse ဖြင့်စီးပွားဖြစ်မြင့်သောကြိမ်နှုန်းအသံလှိုင်းများကိုအသုံးပြုသည်။ ကျွန်ုပ်တို့၏အထူးဖော်စပ်ထားသောအဖြေသည်အမှုန်များကိုသုတ်ပစ်ပြီးဆဲလ်နံရံများသို့ ကပ်၍ မတားဆီးစေသည်။ DPF Alternatives များသည်အကုန်အကျများသော OEM အစားထိုးများအတွက်အစားထိုးတစ်ခုအဖြစ်သာလွန်သော DPF သန့်ရှင်းရေး ၀ န်ဆောင်မှုကိုပေးသည်။
- သန့်ရှင်းရေးပစ္စည်းကိရိယာသည် DPF ၏လည်ပတ်မှုကိုပိုမိုကြာရှည်စေရန်ဒီဇိုင်းပြုလုပ်ထားသည် -
တစ်သက်တာလျှပ်စစ်အစိတ်အပိုင်းများအတွက်အာမခံချက် - အရည်အချင်းပြည့်မှီသော ၀ ယ်သူများအတွက် ၁၀၀% ငွေကြေးထောက်ပံ့ခြင်း
ပစ္စည်းအထုပ်အနိမ့်အမြင့်မှမြင့်သည်။ package အားလုံးသည် DPF များအားအခြေအနေအသစ်သို့ပြန်ယူရန်ခွင့်ပြုလိမ့်မည်။ အသေးစိတ်ကိုခေါ်ပါ 833.737.2583 ext.0 ။
Entry Level Blow နှင့်မုန့်ဖုတ်အထုပ် $ 10,500.00
ပြည့်စုံသောပြန်လည်ထူထောင်ရေးအထုပ်များ • $41,447.90 • $43,447.90 • $43,693.15 • $54,662.90*လူကြိုက်အများဆုံး • $67,187.00 • $75,761.00 • $96,810.90
DPF ၏အခြားရွေးချယ်စရာများ Filter Cleaning & Restoration အကြောင်းလေ့လာပါ
©မူပိုင်ခွင့် - DPF အခြားနည်းလမ်းများ